Root ho an'ny HTC Thunderbolt ao amin'ny 1 tsindrio | Androidsis
Raha tompon'ny HTC Thunderbolt vaovao ianao dia hahita vintana manomboka eo XDA dia namoaka fitaovana hanonganana ny terminal amin'ny tsindry iray amin'ny alàlan'ny script miasa avy amin'ny Windows. Io dia ahafahanao manokatra fahafaha-manao vaovao sy mamoha ny telefaona hahafahanao manao izay tianao atao miaraka aminy, eo ambanin'ny andraikitrao foana.
Afaka miasa miaraka amin'ity script ity tsy maintsy mihaona andiana takiana izay tsy maintsy raisinay, hialana amin'ny olana rehefa manatanteraka ny dingana:
Ny mpamily dia mametraka sy mandeha amin'ny solo-sainantsika eo ambanin'ny Windows.
Android SDK miaraka amin'ny ADB miasa.
Esory ny atin'ny rakitra 'Exploits.zip' ao anatin'ny lahatahiry ADB izay azontsika tamin'ny dingana teo aloha.
Ny fisie PG05IMG.zip
Downgrade mampiasa RUU.
zava-dehibe, ny Thunderbolt antsika dia tsy maintsy manana kinova fikandrana 605.6 na 605.9 hiasa ny zava-drehetra araka ny tokony ho izy.
Miaraka amin'ireo fepetra rehetra ireo dia mandeha ny rakitra OneClickRoot.bat ary hanomboka ny fizotrany. Toy ny mahazatra, tsy misy tompon'andraikitra amin'izay ataonao amin'ny findainao, na ny mpamorona ny fitaovana na isika. Somary saro-pantarina ny fizotrany, indrindra rehefa donwgrade satria misy ny loza mety hitranga. Raha manam-paharetana ianao angamba azonao atao ny miandry fangatahana tsotra kokoa hivoaka izay ahafahanao manao ny fizotrany amin'ny filaminana lehibe kokoa.
Miaraka amin'ity dingana ity hahazo fidirana amin'ny faka isika miaraka amin'ny fahafaha-manao rehetra misokatra ho antsika, manomboka amin'ny fanesorana ny feo fanombohana mahasosotra, ny fametrahana fanarenana mahazatra ary manomboka ny fitsapana ireo ROM masaka sy ireo fahafaha-manolotra arosony. Manomboka ny làlan-kizorana ho an'ny Thunderbolt, avy ao amin'ny ozinina Koreana ary te-hanararaotra izany ny tompony.
Lahatsoratra XDA miaraka amin'ilay fitaovana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » HTC » Root for HTC Thunderbolt amin'ny tsindry 1